အကောင်းဆုံးဘဲ မမရီ – Grab Love Story
ဂျွတ်…” ” အ….” ” ဖြောင်း….” ” ဝုန်း…အမလေး….” ” ဟဲ့…ဟဲ့…လုပ်ပါဦး….ဟိုမှာ ဖိုးတာ အပေါက်ကျွံပြီ….အော်…ဒီကလေးနယ်….ရေပုံးကြီးတစ်ဖက်နဲ့ အို….” အရီးလေးရဲ့ အော်သံကြောင့် မမရီဟာ ကမန်းကတန်းပြေးလာပြီး ကျွန်တော့်ကို ဆွဲထူပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မမရီရဲ့ ပုခုံးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ လှမ်းပြီး ဆွဲဖက်ကာ အားယူပြီး ထလိုက်ပါတယ်။ မမရီကပဲ အပေါက်ထဲကျွံနေတဲ့ ကျွန်တော့် ရဲ့ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ငုံ့ပြီး သူ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ” ဟင်….သွေးတွေ…” မမရီက အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားသည်။ ” ထိုင်….ထိုင်လိုက်….အတာ….” ကျွန်တော်လည်း ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ခြေထောက်ဆင်းပြီး ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ပြောပြီးတာနဲ့ မမရီက သူ့အခန်းလေးထဲဝင်သွားပြီး ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ စောစောက ကျွန်တော် အပေါက်ကျွံတုန်းက ဆွဲလာတဲ့ ရေပုံးကို သူကလှမ်းပြီး ယူလိုက်ပါတယ်။ ရေပုံးထဲမှာတော့ ရေကနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်။ မမရီက ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုဆိုးကို ဆွဲပြီး လှန်တင်လိုက်ရာက ထိထားတဲ့ ပေါင်ရင်းနေရာကို ရေပုံးထဲမှာ ကျန်တဲ့ရေနဲ့ သူ့လက်ခုပ်လေးနဲ့ ယူယူပြီး ဆေးလိုက်ပါတယ်။ သစ်သားစက ပေါင်ရင်းမှာ ထိုးမိသွားပြီး အသားကို စပါးလုံးတစ်ထောက်လောက် မြုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒဏ်ရာမှာ သစ်သားစတော့ ကျန်ခဲ့တာ မရှိပါဘူး။ ရေဆေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ သူယူလာတဲ့ ပုလင်းလေးထဲက ဆေးရည် သုံးလေးစက်ကို လောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ ” အား….စပ်တယ်….ရှီး….ဟူး….” မမရီကလည်း သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ချွန်ပြီး အနာနေရာကို လေနဲ့မှုတ်ပေးပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ သူက အခန်းထဲပြန်ဝင် သွားပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ သူ့လက်ထဲမှာ အဝတ်စတစ်ခုပါလာတာတွေ့လိုက်ရပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ အနားလည်းရောက်ရော ထိုင်ချလိုက်ပြီး သူ့လက်ထဲက အဝတ်စကို ဖြဲပြီး အနာကို ပတ်တီးစည်းပေးပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ သူကပဲ ကျွန်တော့်ကို တွဲပြီး အိမ်ကိုလိုက်ပို့တဲ့အပြင် အတွင်းခန်းလေးထဲအထိ လိုက်လာပြီး အခန်းလေးထဲက တန်းမှာရှိနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အင်္ကျီနဲ့ ပုဆိုးကို ယူကာ ကျွန်တော့်ကို အဝတ်လဲပေးပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့…. ” ကဲ….အတာ လှဲနေလိုက်….လာ…” ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို တွဲပြီးထိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အနာက နာနေတာကြောင့် အိပ်ယာထဲလှဲပြီးနေလိုက်ပါတယ်။ ” အိပ်ချင် အိပ်လိုက်အတာ….အိပ်ပျော်သွားတော့ အနာသက်သာတာပေါ့….မမ ညနေကျ တခါလာပြီး ဆေးထည့် ပေးဦးမယ်…” ” ဟုတ်ကဲ့….” ” ဒါဆို မမ ပြန်လိုက်ဦးမယ်…” ဆိုပြီး မမရီဟာ ပြန်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ မမရီတို့အိမ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့အိမ်က အိမ်နီးချင်းကပ်ရက်ဖြစ်ပြီး မမရီတို့အိမ်မှာက မမရီနဲ့ သူ့အမေ အရီးလေးတို့ သား အမိနှစ်ယောက်ထဲရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကလည်း ကျွန်တော်နဲ့ အဖွားလေးတို့ နှစ်ယောက်ထဲပဲရှိပါတယ်။ မမရီတို့ အိမ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့အိမ်က နှစ်အိမ့်တစ်အိမ်လိုဖြစ်နေပြီး မိသားစုတွေလို နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားသားမရှိတဲ့ မမရီ တို့အိမ်က ထင်းခွဲ၊ ရေခပ် အလုပ်တွေကို ကျွန်တော်က ကြုံရင်ကြုံသလို ဝင်ပြီးလုပ်ပေးသလို မမရီကလည်း အဖွားလေးရဲ့ မီးဖိုချောင်ကိစ္စတွေကို မကြာခဏဆိုသလိုဝင်ပြီး ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးရုံမျှမကဘဲ တခါတရံ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဝတ်အစားအ ဟောင်းတွေကိုပင် ဆွဲပြီးလျှော်ပေးသွားပါသေးတယ်။ အခုလည်း ကျွန်တော်က မမရီတို့အိမ်က မီးဖိုဆောင်ထဲက သုံးရေအိုး ထဲကို ရေခပ်ပြီးထည့်ပေးရာက ကြမ်းပေါက်ကျွံကျခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီကနေ မမရီပြန်သွားပြီး မကြာခင်မှာပဲ သူတို့အိမ်ဖက်က တဒုံးဒုံးထုသံကြားလိုက်ရပါတယ်။ စောစောက ကျွန်တော်ကျွံကျခဲ့တဲ့ အပေါက်ကို ပြန်ပြီးဖာထေးပြုပြင်နေ တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိန်းမသားချည်းပဲ နေတဲ့အိမ်ဆိုတော့လည်း တော်ရုံတန်ရုံကိစ္စတွေကို သူတို့ဟာ သူတို့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်နေကြတဲ့ သဘောပါပဲ။ အဲဒီနေ့ကနေစပြီး မမရီဟာ နေ့တိုင်း ကျွန်တော့် အနာကို လာပြီးဖန်ရေဆေးပေးရင်း ဆေးထည့် ပေးပါတယ်။ ဆေးက ဟိုစပ်တဲ့ ဆေးအရည်မဟုတ်တော့ဘဲ ပရုပ်ဆီလိုဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပရုပ်ဆီတော့ မဟုတ် ပါဘူး။ မမရီ ဆေးလာထည့်ပေးရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုဆိုးကို ချွတ်ကာ ပေါင်ရင်းမှ အနာကို ဖန်ရည်ဆေးပေးခြင်း၊ ဆေးထည့် ပေးခြင်းတွေလုပ်တာဆိုတော့ ပထမ တစ်ရက်ကတော့ အနာက နာနေတော့ သတိမပြုမိဘဲ နောက်တော့ ကျွန်တော့်မှာ ရှက် လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း။ မမရီ၏ မျက်နှာကိုပင် ကောင်းစွာမကြည့်ဝံ့တော့ပါ။ ကျွန်တော့်အနေနှင့် ရှက်မည်ဆိုကလည်း ရှက်စရာပင်။ ကျွန်တော့်အသက်မှာ (၁၄)နှစ်သားရှိပြီမို့ လူပျိုပေါက် အ ရွယ်ဖြစ်ကာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ယောက်ျားအင်္ဂါကြီးကလည်း မသေးတော့ပါ။ လုံးပတ်ကို တပတ်လည်တိုင်းကြည့်ရင် လေးလက်မ ခွဲလောက်ရှိပြီး အရှည်က ငါးလက်မခွဲလောက်ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း စံရွှေ အတင်းတိုင်းလို့ သိထားရ တာပါ။ သူ့အဒေါ်က စက်ချုပ်တော့ သူတို့အိမ်မှာ ပေကြိုးလေးရှိတယ်လေ။ အဲဒါ ကျွန်တော်သွားဆော့တုန်း လူကြီးတွေ အလစ်မှာ အတင်းတိုင်းပေးလိုက်တာပါ။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆီးခုံက အမွှေးနုလေးတွေကလည်း ခပ်ရေးရေးပေါက်နေကြ ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လေးရက်မြောက်နေ့မှာတော့ အနာကလည်း အတော်လေးသက်သာပြီး ပျောက်သလောက်ဖြစ်ကာ ကောင်းစွာ ဆော့ကစားနေနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ညနေပိုင်းတွင်တော့ မမရီဟာ ထုံးစံအတိုင်း ဆေးထည့်ပေးရန်အတွက် ကျွန်တော့်ထံသို့ ရောက်လာခဲ့ပါသည်။
” အတာရေ….မင်း အဖွားလေးကော မမြင်ပါလား….ဘယ်သွားသလဲ….” ” စောစောကမှ ထွက်သွားတာ မမရီ….ဘယ်လဲတော့ မသိဘူး….” ” မမရီ မင်းအနာ ဆေးလိမ်းပေးဖို့ ဆေးယူလာတယ်….လာ လာ….ဆေးလိမ်းရအောင်….” ဟူ၍ ခေါ်သဖြင့် ကျွန်တော့်အခန်းတွင်းသို့ ဝင်လာပါတော့သည်။ သူက ကျွန်တော့်နောက်ကနေဝင်ပြီး လိုက်ပါလာပါ တယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း အိပ်ယာပေါ်ကိုလှဲလိုက်ရော မမရီက ကျွန်တော်လှဲနေရာဘေးမှာ ဝင်ပြီး ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ” ကဲ….ငါ့မောင် မင်းပုဆိုးလှန်လိုက်စမ်း….မမ ဆေးလိမ်းပေးမယ်….” ကျွန်တော်လည်း အကျင့်ဖြစ်နေတော့ သိပ်ပြီးမရှက်တော့တာမို့ ပက်လက်အိပ်နေရာမှ ပုဆိုးကို လှန်ပေးလိုက်ရာ မမရီက ကျွန်တော့်၏ ပေါင်ရင်းမှ ကျက်လုပြီဖြစ်သော အနာအား ပွတ်ခါသပ်ခါ ဆေးလိမ်းပေးနေပါတော့သည်။ ထိုသို့ ဆေး လိမ်းပေးနေစဉ် မမရီ၏ မျက်နှာအား ကြည့်လိုက်ရာ မမရီ၏ မျက်နှာမှာ ခါတိုင်းကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ သွေးရောင်းများ လွှမ်းလျက် မျက်လုံးများမှာလည်း ပိုမို၍ အရောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဆေးလိမ်းပေးနေသော လက်က ပေါင် ရင်းတွင် ပွတ်သပ်လိမ်းနေရင်းက ကျွန်တော်၏ ရွှေပန်းကြီးနှင့် မထိတထိဖြစ်ဖြစ်နေသည့်အတွက် ကျွန်တော့်မှာ ရင်ထဲက ကတုန်ကရင်ကြီးဖြစ်လာပြီး ကျွန်တော့်ဟာကြီးက တဆတ်ဆတ်လှုပ်ကာ ထောင်လာပါတော့သည်။ မမရီလည်း ကျွန်တော့် ဟာကြီးကို သေချာစွာ စိုက်ကြည့်နေရင်းက လက်တဖက်ဖြင့် လှမ်း၍ ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။
” ဟင်း….ကြည့်စမ်း….မင်းဟာ လူပျိုတောင်ဖြစ်နေပါပေါ့လား….မင်း ဥစ္စာကြီးက နည်းတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ဘူး….မမ လက်နဲ့ ဆုတ်ကြည့်တာ လက်တဆုတ်စာတောင် ကောင်းကောင်းမမှီဘူး….ဟင်း….အရင်းမှာလည်း အမွှေးနုလေးတွေ တောင် ပေါက်နေပြီပဲ….မောင်လေး….” ထိုသို့ပြောကာ မမရီက ကျွန်တော့်လီးကြီးကို အားရပါးရ ဆုတ်နယ်လိုက် ဂွေးအုအား မ ကြည့်လိုက်ဖြင့် လုပ်နေပြီး တံတွေးတဂွတ်ဂွတ်မျိုချနေပါတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် အရေးကောင်း ဒိန်းဒေါင်းဖျက်ဆိုသလို အိမ်ရှေ့ဆီမှ အဖွားလေး၏ အသံကို ကြားလိုက်ရသည်။ ” လူလေး….အတာ….အိပ်ပြီလားကွယ့်….” အဖွားလေး၏ အသံထွက်ပေါ်လာသောကြောင့် မမရီ၏ မျက်နှာသည် မချင့်မရဲဖြစ်သွားရပြီး…. ” မအိပ်သေးပါဘူး အဖွားလေးရယ်….ကျမ အတာကို လာပြီး ဆေးလိမ်းပေးနေပါတယ်….” ” အော်….အော်….အရီရောက်နေတာကိုး…ညီးမလည်း ညီးမောင်အတွက် တဒုက္ခပါပဲအေ…အနာကလည်း ပျောက် သလောက်ဖြစ်နေပါပြီ….သမီးလည်း အားနာစရာဖြစ်နေပါပြီကွယ်….” ” အို…ကိစ္စမရှိပါဘူး အဖွားလေးရယ်…..ကျမအတွက်ဘာမှ အားနာစရာမရှိပါဘူး….ကဲ အမေမျှောနေတော့မယ်….. ကျမ ပြန်ဦးမယ် အဖွားလေး….အတာရေ….မမပြန်ဦးမယ်နော်….မင်းလည်း အိပ်တော့….” ” အော်….သမီး ညည်းအမေကို မနက် ဥပုသ်ကျောင်းကို စောစောသွားမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါအေ….” ” ဟုတ်ကဲ့…အဖွားလေး ပြောလိုက်ပါ့မယ်….သမီး ပြန်ပြီနော် အဖွားလေး….” ” အေး….အေး…သမီး….” နောက်တစ်နေ့တွင်တော့ မမရီတစ်ယောက် မနက်ပိုင်းမှာပင် အဖွာလေးနှင့် အရီးလေးတို့ ဥပုသ်ကျောင်းသွားကြ သည်နှင့် ခဏအကြာမှာပင် ကျွန်တော့်ထံသို့ ရောက်လာပါသည်။
ကျွန်တော်က မနေ့က ညနေကကိစ္စကို တွေး၍ သတိရနေ သည့်အတွက် မမရီအား တော်တော်နှင့် စကားမပြောမိဘဲ ရှိနေသည်။ မမရီလည်း ထိုနည်းတူစွာပင် တွေး၍နေမည်ဟု ထင်ပါသည်။ တစ်ဦးကို တစ်ဦး စကားမပြောမိကြဘဲ ခဏကြာငြိမ်သက်နေကြပြီးတော့မှ မမရီကပင် စတင်၍…. ” မောင်လေး….အတာ…မင်းအနာ ဘယ့်နှယ်နေသေးသလဲ….” ဟု မေးလိုက်သည်။ ” ပျောက်သလောက် ရှိနေပါပြီ မမရီရယ်….” ” ပြစမ်းပါဦးကွယ်….မမကို မရှက်ပါနဲ့ ဘယ်သူမှ ရှိတာမှ မဟုတ်တာ….” ပြောပြောဆိုဆိုပင် မမရီသည် ကျွန်တော့်ပုဆိုးအား ဆွဲ၍လှန်လိုက်လေသည်။ ” အို….ဒီပုဆိုးကြီးကလည်း ပြန်ပြန်ဖုံးနေလိုက်တာ ဖယ်စမ်းပါ….အကုန်လုံး လှန်ပစ်လိုက်စမ်းပါ….ဘယ်သူမြင်တာ မှတ်လို့….မမနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲများ ရှက်မနေစမ်းပါနဲ့ကွယ်….” ထိုသို့ မမရီက ကျွန်တော်နှင့် ပူးပူးကပ်ကပ်နေကာ သူမ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးနှင့် ကျွန်တော့်လက်မောင်းအား ပွတ်တိုက် နေမိရက်က ကျွန်တော့်ပုဆိုးအား အတင်းလှန်နေစဉ်မှာပင်…. ” ဖုတ်….” ” အမလေး….” အပေါ်မှ အိမ်မြှောင်နှစ်ကောင်က မမရီဘေးသို့ ပူးရက်သားရုတ်တရက်ပြုတ်၍ ကျလာရာ အိမ်မြှောက်ကြောက်တတ် သော မမရီကလန့်ပြီး ကြောက်အားလန့်အားဖြင့် ဖက်မိဖက်ရာ ဖက်လိုက်ရာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားသည်မသိပါ…. ခဏနေ၍ ကြည့်လိုက်မိရာ…. ကျွန်တော်က ခြေနှစ်ချောင်းဆင်းလျက် ပုဆိုးလှန်ကာ ပေါင်ကားထားပြီး ခါးကို မတ်မတ်ထား၍ လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်သို့ထောက်လျက်သားဖြစ်နေသည်။
မမရီက ကျွန်တော့်ပုဆိုးလှန်ပြီး ပေါင်ကားထားသော အပေါ်မှခွထိုင်လျက် ကျွန်တော့်အား သူမ၏ ကြီးမားသော နို့ကြီးနှစ်လုံးနှင့် တအားဖိကပ်၍ ဖက်ထားကြောင်း သိလိုက်ရပါတော့သည်။ ထိုအခါမှ မမရီက…. ” အိုကွယ်….လန့်လိုက်တာများ….” ဟုဆိုကာ ကျွန်တော့်အပေါ်မှ မဆင်းချင် ဆင်းချင် ဆင်းလိုက်ပါတော့သည်။ ကျွန်တော်က လူပျိုပေါက်ပင် ဖြစ်နေသော်လည်း ဖိုမ အကြောင်းကို ဘာမှ နားမလည်ခဲ့ပါ။ သို့သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ နူးညံ့ သော မဓာတ်နှင့် တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ထိမိသောအခါတွင်မူကား ကျွန်တော်၏ အသိစိတ်က နားမလည်ဘဲရှိစေကာမူ ကျွန်တော်၏ သွေးသားတွေက နားလည်နေပုံရပါသည်။ မမရီနှင့် ထိတွေ့လိုက်ရသည်ဆိုလျှင်ဖြင့်ပင် ကျွန်တော်၏ လီးကြီးက တအားကြီးပင် မာထောင်၍ လာပါတော့သည်။ ထိုအဖြစ်အား တွေ့မြင်ရသော မမရီကလည်း ညကကဲ့သို့ပင် ကျွန်တော်၏ မာ တောင်နေသော လီးကြီးအား သူမ၏ လက်နှင့်ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်လျက်…. ” ကြည့်စမ်း….မောင်လေး မင်းဟာကြီးက ညကလိုပဲ ထလာပြန်ပြီ ကြီးလိုက်တာလည်း လွန်ပါရော….လူနဲ့တောင် မလိုက်ဘူး….” ” အို….မမကလည်း သူ့ဖာသာသူကြီးလာတာ ကျွန်တော်လည်း ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ….ဒါကြီးဒီလိုကြီးနေရင် ဘာဖြစ် တတ်လဲဟင် မမ….” ” အို….မောင်လေးရယ်….မင်းတကယ် နားမလည်ဘူးလား ဟင်….” ” တကယ်ကို မသိတာပါ…မမ…” ” ဒါဖြင့် မင်းနားလည်အောင် မမ သင်ပေးမယ်….မမ ခိုင်းသလို လုပ်မလား….” ” အို….မမကသာ သင်ပေးမယ်ဆိုရင် လုပ်မှာပေါ့ မမရဲ့….” ” တကယ်နော်….နောက်ပြီးတော့ မင်း ဘယ်သူမှ လျှောက်မပြောရဘူး သိလား….” ” မပြောပါဘူး….မမရာ….စိတ်ချစမ်းပါ….” ” ကဲ…ဒါဖြင့် လာ….မမ ပြောသလိုလုပ်နော်….” ပြောပြောဆိုဆိုပင် မမရီသည် ပက်လက်လှန်၍ အိပ်လိုက်ပြီး သူမ၏ ထဘီအားချွတ်လိုက်ခါ ပေါင်ဖွေးဖွေးကြီးနှစ်လုံး ကို ကားထားလိုက်ပါတော့သည်။ ထိုသို့ ပေါင်ကြီးနှစ်လုံး ကားထားသည်ကို မြင်လိုက်ရလျှင် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် အံ့သြပြီး မျက်လုံးကျွတ်ထွက်မတတ်ပင် စူးစိုက်ကြည့်ရှုမိပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်သည် ငယ်စဉ်မှစ၍ ခုချိန်ထိ မိန်းမဥစ္စာဆိုလျှင် ကလေးငယ်များ၏ဟာကိုသာ တွေ့မြင်ဖူးခဲ့ပြီး ဒါလောက်ကြီးသော ဟာကြီးအား မတွေ့ဖူးခဲ့ပေ။ ယခုမူ မမရီ၏ ဟာကြီးက ကျွန်တော်၏ လက်ဝါးနှင့် အုပ်ကြည့်လျှင်ပင် လက်ဝါးတအုပ်စာထက်ပင် ပိုလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။ သူ့ဟာ ကြီး၏ အထက်နားတွင် ခပ်စိမ်းစိမ်းအမွှေးလေးများရှိနေပြီး ခလယ်ရှိ အကွဲကြောင်း၏ အထက်နားတွင် ငုတ်တုတ် အစိလေး တစ်ခုက ပြူးပြူးလေးရှိနေပါသည်။ ပြီးတော့ သူ့ဟာကြီးကလည်း ခုံးခုံးကြီးဖောင်းနေတော့ ကျွန်တော့်မှာ အံ့သြမဆုံးဖြစ်နေရ ပါသည်။ ” မောင်လေး….လာလေ….ဘာကြည့်နေတာလဲ….မမ ပေါင်ကြားထဲကိုဝင်ပြီး ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်လိုက်စမ်း….” ဟုပြောသဖြင့် သူပြောသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်က ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ ဝင်၍ ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်လိုက်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် မမရီက ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်လိုက်ပြီး…. ” အမလေးဟဲ့….အတာတို့များ အ လိုက်တာ လွန်ရော….ဒီပုဆိုးမချွတ်ဘဲ ဘယ်လိုလုပ်လိုးမှာလဲဟဲ့…..” ” ဗျာ….” ကျွန်တော်လည်း ခါးမှ ပုဆိုးကို ခေါင်းမှပင့်၍ ချွတ်လိုက်ပါသည်။ ပုဆိုးချွတ်ပြီးသွားစဉ်မှာပင် သူမ၏ ဒကောက်ကွေး နှစ်ဖက်က ကျွန်တော်၏ ခါးအားလှမ်းချိတ်လိုက်ပါတော့သည်။
ထိုအခါတွင်တော့ ကျွန်တော်၏ လီးကြီးထိပ်က သူမ၏ ပြဲနေ သော အကွဲကြောင်းကို သွား၍ ထောက်မိနေပါတော့သည်။ ” မမဟာကြီးက တော်တော်ကြီးတယ်နော်….ကျွန်တော်ဖြင့် တခါမှ မမြင်ဖူးဘူးဗျာ….” ” အဲဒါကြီးကို စောက်ပတ်လို့ ခေါ်တယ် မောင်လေးရဲ့….အဲဒီစောက်ပတ်ကြားထဲက အထက်နားက အစိလေးက စောက်စိလို့ခေါ်တယ်…နင့်လီးကြီးကို မမစောက်ပတ်ထဲ ထိုးသွင်းပြီး အရင်းထိ ထိုးသွင်းလိုက်….အဖျားနားထိ ပြန်ဆွဲထုတ် လိုက်….နောက်ပြန်သွင်းလိုက်နဲ့ လုပ်တာကို လိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်….အဲဒါ အခုမောင်လေးနဲ့ မမ လိုးကြမလို့….မမ ပြောသ လိုလုပ်နော်….” ထိုသို့ပြောပြီး ကျွန်တော့်လီးကြီးအား ကိုင်ကာ သူမ စောက်ပတ်အပေါက်ဝတွင် တေ့ပေးပြီး…. ” ကဲ မောင်လေး….တဖြေးဖြေးခြင်း ဖိပြီး မောင်လေးလီးကြီးကို မမ စောက်ပတ်ထဲကို အဆုံးဝင်သွားအောင် သွင်း လိုက်ပေတော့….ဖြေးဖြေးနော်….” ” ဟုတ်ကဲ့….မမ….” ကျွန်တော်လည်း မမရီပြောသလိုပင် တဖြေးဖြေးချင်း ဖိသွင်းလိုက်ရာ မမရီမှာ အောက်မှနေ၍ အံကြိတ်ပြီး ကော့ပေး လိုက်သည့်အတွက် ကျွန်တော့်လီးကြီးတစ်ချောင်းလုံးက အဆုံးထိဝင်သွားပါတော့သည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က ဘာလုပ်ရ မှန်းမသိဘဲ လီးကြီးကို အဆုံးသွင်းပြီး ရပ်ထားလိုက်ရာ မမရီမှာ အောက်မှနေပြီး အားမလိုအားမရသံဖြင့်…. ” မောင်လေး…ဆက်လုပ်လေ….မင်းလီးကြီးကို မမ စောက်ပတ်ထဲက တဝက်ကျော်ကျော် ဆွဲထုတ်လိုက် ဆောင့် သွင်းလိုက်နဲ့ လုပ်ရတယ် မောင်လေးရဲ့….လုပ်…လုပ်….ဆက်လုပ်….” ကျွန်တော်လည်း မမပြောသည့်အတိုင်း ကျွန်တော့်လီးကြီးကို သူမစောက်ပတ်ထဲက တဝက်ကျော်ကျော်လောက်ပြန် နှုတ်လိုက်….အဆုံးထိဆောင့်သွင်းလိုက်နှင့် ဆယ်ချက်ခန့်ဆောင့်မိသော် ကျွန်တော့်လီးကြီးသည် မည်သည့်အရသာနှင့်မှ မတူအောင် အသဲထဲကယားလာအောင် အရသာတွေ့လာပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်လည်း အချိန်အဆကလည်း ကျွတ်ထွက်မသွားအောင်ဆောင့်တတ်လာပြီမို့ မမရီ၏ ပုခုံးနှစ်ဖက်အား ဆွဲကာ အားရှိပါးရှိ ဆောင့်ပါလေတော့သည်။
” မောင်လေး…..မောင်လေး….ခဏနေအုံး….မမ ပြောမယ်….” ဟုဆိုသဖြင့် မရပ်ချင်ဘဲ ရပ်လိုက်ရပါသည်။ ကျွန်တော့်မှာ အင်မတန် အရသာတွေ့တုန်း ရပ်လိုက်ရသည့်အတွက် စိတ်ထဲတွင် မချင့်မရဲဖြစ်ပြီး အသားများ တဆတ်ဆတ်တုန်နေပါတော့သည်။ ထိုအခါ မမရီက ကျွန်တော်၏ လက်နှစ်ဖက် အား ဆွဲယူပြီး သူမ၏ ကြီးမား၍ တင်းနေသော နို့ကြီးနှစ်လုံးပေါ်တင်ပေးကာ…. ” မောင်လေး….အဲ့ဒီနို့ကြီးနှစ်လုံးကို အားရပါးရ ဆွဲဆွဲပြီး လိုးပေတော့….ဒါမှ ပိုပြီးဆောင့်အား ကောင်းတာ….လိုး…. လိုး….မောင်လေး….အားရှိသလောက် တအားသာ ဆောင့်လိုးပေတော့…..မမကို ဘာမှ အားမနာနဲ့….အောက်ကနေ မောင်လေး လိုးသလောက် ကြိတ်ခံမယ်….ဆောင့်သာဆောင့်….အေး ဟုတ်ပြီ….ဆောင့် ဆောင့်…..အမလေးဟဲ့….မမရဲ့ စောက်ပတ်ကြီး ကွဲချင်ကွဲသွားပါစေ….တအားဆောင့်စမ်းပါ….မောင်လေးရဲ့….အား…ကောင်းလိုက်တာ….မောင်လေးရာ…. ဆောင့်….ဆောင့်….အင့်….အင့်….အင့်….အင့်….ဟုတ်ပြီ….ဆောင့်….ဆောင့်…..” ကျွန်တော်လည်း တကိုယ်လုံး ဆိမ့်တက်အောင်ပင် ကောင်းနေရသဖြင့် အသားများ တဆတ်ဆတ်တုန်အောင်ပင် ဖြစ်နေရပြီး အရသာတွေ့နေပြီမို့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် တကိုယ်လုံးရှိသမျှ အင်အားတွေဖြင့် ဆောင့်၍လိုးတော့သည်။
” ဘွပ်….ပြွတ်….ဘွပ်….ပြွတ်….” ” အင့်….အင့်….အွတ်….အွတ်…..” မမရီ၏ စောက်ပတ်ကြီးမှာလည်း တဘွတ်ဘွတ်မြည်ပြီး ပါးစပ်မှလည်း ပထမတုန်းကလို အင့်…အင့် ဟု အသံမ ထွက်တော့ဘဲ အောက်မှ အတော်ပင် မောနေသကဲ့သို့ ပါးစပ်လေး ဟဟပြီး အွတ်ကနဲ အွတ်ကနဲ အသံထွက်နေပါတော့ သည်။ ကျွန်တော်လည်း မမရီ၏ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးအား ကြေမွပြတ်ထွက်ပါလာမတတ် တအားညှစ် တအားဆွဲပြီး မီးကုန်ယမ်း ကုန် ဆောင့်တော့ရာ ငါးမိနစ်မျှ အကြာတွင်တော့ ကျွန်တော့်၏ လီးကြီးတစ်ခုလုံးမှ အကြောအချင်များသည် နွေးကနဲ စစ်ကနဲဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်၏ လီးထဲမှ ပူနွေးသော အရည်များသည် ဗြစ်ကနဲ ဗြစ်ကနဲ မမရီ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ပန်းထွက်ကုန် ပါလေတော့သည်။ ကျွန်တော်လည်း ခြေကုန်လက်ပမ်းကျပြီး မမရီ၏ အပေါ်သို့ မှောက်လျက်ကျသွားသော အချိန်တွင် မမရီ သည်လည်း ခြေပစ်လက်ပစ်ဖြစ်ကာ မျက်လုံးလေး မပွင့်တပွင့်ဖြင့် ပေါင်တွေစင်းနေပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်လျက် က မျက်နှာထားပြုံးပြုံးလေးနှင့် မှိန်းနေပါတော့သည်။ ခဏမျှကြာတော့မှ…. ” မောင်လေး….တော်တော်မောသွားပြီလား….မမပေါ်က ခဏဆင်းပါဦးကွယ်….” လို့ မမရီက ပြောလိုက်တော့မှ ကျွန်တော်လည်း မလှုပ်ချင် လှုပ်ချင်နှင့် မမ၏ စောက်ပတ်ထဲမှ ကျွန်တော်၏ လီးကြီး ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ရာ ဘွတ်ကနဲ မြည်သံနှင့်အတူ လီးကြီးက ထွက်၍လာပြီး တပြိုင်နက်ထဲမှာပင် မမ၏ စောက်ပတ်ထဲမှ ပြည့်လျှံနေသော အရည်များကလည်း ဖွတ်ကနဲ အန်၍ ထွက်ကျလာလေသည်။
လီးကြီးကို ဆွဲချွတ်ပြီးသည်နှင့် ကျွန်တော် လည်း သူမ၏ အပေါ်မှ ဆင်းလိုက်ပါတော့သည်။ ဒီလိုဆင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော် သတိထားမိတာကတော့ ကျွန်တော်တို့စပြီး လိုးစဉ်ကနေရာထက် ခေါင်းရင်းသို့ (၂)ပေခန့် ရောက်ရှိနေကြောင်း တွေ့ရပြီး မမရီ၏ နို့အုံကြီးများမှာ လည်း စောစောကလို ဖြူဖွေးပြီးမနေတော့ဘဲ ကျွန်တော်ကိုင်ထားသည့် လက်ရာကြီးများအတိုင်း အညိုအမဲစွဲနေပါတော့ သည်။ ကျွန်တော်သည် မမရီ၏ ဘေးတွင် လှဲချလိုက်ပြီး သူမ၏ နီထွေးထွေး ပါးလေးနှစ်ဖက်ကို နမ်းလိုက်သည်။ ” မမ တော်တော်မောသွားလား…ဟင်…” ” သိပ်မမောပါဘူးကွယ်….ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်….မောင်လေးရော အတော်မောသလား….” ” ကျွန်တော်က လူငယ်ပဲ….ထင်သလောက် မမောပါဘူး….ဘယ့်နှယ်လဲ မမ ကျွန်တော်နဲ့ လိုးတာ ကောင်းရဲ့လား ….” ” ဘယ့်နှယ် မေးပါလိမ့် မောင်လေးရယ်….မမဖြင့် အခု အသက်သုံးဆယ်ကျော်ပြီ….ဒီလိုတခါမှ ကောင်းကောင်းမခံ ဖူးဘူး….မောင်လေး လိုးလိုက်တာ မမဖြင့် လေးခါတောင်ပြီးသွားတယ်….မောင်လေးကသာ တစ်ခါထဲပြီးတာ…..အခုတောင် မောင်လေး လိုးနိုင်ဦးမယ်ဆိုရင် တစ်ခါလောက်တော့ ထပ်ပြီးခံချင်သေးတယ်…..” ” ဒီလိုဆို လိုးမှာပေါ့ မမရာ….ကျွန်တော်က ဒါမျိုး တခါမှ မတွေ့ဖူးတော့ အရမ်းဆောင့် အရမ်းလိုးပစ်လိုက်တာ မမမှ နောက်ထပ် ခံနိုင်ပါဦးမလားလို့….” ” အော်….မင်းနှယ်….မမတို့ မိန်းမဆိုတာ အောက်ကမှိန်းခံရုံခံရတာ….မင်းတို့ ယောက်ျားတွေ လိုးနိုင်သလောက် တော့ ခံနိုင်တာပေါ့ကွယ်….” ကျွန်တော်လည်း မမရီ၏ ပေါင်ဖွေးဖွေးကြီးနှစ်လုံးကြားထဲသို့ ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးအား တောင် မတ်နေသော လီးကြီးနှင့် တေ့ထားကာ နို့ကြီးနှစ်လုံးအား ဆွဲပြီး တအားဆောင့်သွင်းလိုက်ရာ စောစောက လိုးထားသော အရည်များရွှဲနေသောကြောင့် လီးကြီးက ရှောကနဲ ဝင်သွားပါလေတော့သည်။
ဒီတခါတော့ အရသာသိထားပြီမို့ စောစောက အချီလောက် အသကုန်မဟုတ်တော့ဘဲ အရသာခံ၍ မှန်မှန်ပဲ လိုးကြပါတော့သည်။ ကျွန်တော်နှင့် မမရီတို့သည် နားလိုက် လိုးလိုက်ဖြင့် ဇိမ်ခံပြီး လိုးနေကြရာ မမရီလည်း အပေးကောင်း….ကျွန်တော်ကလည်း အလိုးကောင်းဖြင့် အားရပါးရ လိုး လိုက်ကြသည်မှာ မွန်းလွဲ ညနေပိုင်းကျမှ အဝတ်အစားတွေ ပြန်ပြီး ဝတ်ဖြစ်ကြပါလေတော့သည်။ နောက်နေ့တွင် ကျွန်တော်သည် မမရီကို တနေကုန် မတွေ့ရသဖြင့် ညနေပိုင်းရောက်တော့ မနေနိုင်ဖြစ်ကာ မမရီတို့ အိမ်ဖက်သို့ ကူးခဲ့ရာ အိမ်အဝင်အထွက်၌ပင် မမရီ၏ မိခင် အရီးလေးနှင့် တွေ့သည်။ ကျွန်တော့်ကို တွေ့လိုက်လျှင်ပင် အရီးလေးကပင် စ၍ နှုတ်ဆက်သည်။ ” မောင်တာ….ထမင်းစားပြီးပြီလား ဟေ့….” ” ဟုတ်ကဲ့….အရီးလေး ခုပဲ ထမင်းစားပြီးတယ်….ဒါနဲ့ မမရီကိုလည်း မတွေ့ပါလား….ဘယ်များသွားနေသလဲ အရီးလေး….” ” အော်….မင်းအမ ကိုယ်တွေလက်တွေ ကိုက်ခဲပြီး နေမကောင်းလို့တဲ့ အခုလေးတင် မင်းကို တွေ့မိလားလို့ မေးနေ သေးတယ်….” ” ဟုတ်လား အရီးလေး….ကိုယ်တွေ လက်တွေ ကိုက်ခဲနေရင်လည်း ခါတိုင်းလို ကျွန်တော့်ခေါ်ပြီး အနင်းခိုင်းပေါ့ဗျာ. ….နင်းပေးမှာပေါ့…..” ” အေးကွယ်….မင်း အမသွားပြီး မေးကြည့်လိုက်ပါဦး…..အရီးလေး ဟိုဖက်ပိုင်းခဏသွားဦးမယ်…..” ” ဟုတ်ကဲ့….အရီးလေး….” ပြောပြောဆိုဆို မမရီ၏ အမေကြီး ထွက်သွားသဖြင့် ကျွန်တော်လည်း အပေါ်သို့တက်၍ မမရီ အိပ်နေကျ အခန်း လေးအတွင်းသို့ ဝင်ကြည့်လိုက်လျှင် မမရီက အိပ်ယာထက်မှ ပြုံးလျက်သား ဆီးကြို၍နေသည်။
” လာ….မောင်လေး…..မမဖြင့် မျှော်လိုက်ရတာ….” ဟု ပြောလျက် ထ၍ထိုင်လိုက်ရာ ကျွန်တော်ကလည်း သူမဘေးတွင်ဝင်၍ ထိုင်လိုက်ရင်း…. ” ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ မမရယ်….ကျွန်တော်ဖြင့် ဒီကနေ့ တစ်နေ့လုံး မမကို မတွေ့ရတာနဲ့ ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲဖြစ်ပြီး မမကို သိပ်လွမ်းတာပဲဗျာ….” ထိုသို့ပြောရင်းမှပင် ကျွန်တော်သည် မမကို ကြည့်ရင်းစိတ်ကို မထိန်းနိုင်တော့သဖြင့် သူမကို ဖက်ရင်း အားရပါးရပင် သူမ၏ ပါးနှစ်ဖက်အား ဘယ်ပြန်ညာပြန် နမ်းလိုက်သည်။ ” အို….ဖြေးဖြေး မောင်လေးရဲ့….ဖြေးဖြေး….မင်း မနေ့က ဆောင့်လိုက် ညှောင့်လိုက်တဲ့ ဒဏ်တွေက မနက်တုန်းက တကိုယ်လုံးကိုင်ရိုက်ထားသလိုပဲ အိပ်ယာထဲကကို မထချင်ဘူး….အထူးသဖြင့် ဟောဒီ မင်း ဆွဲချေထားတဲ့ နို့သီးတွေဟာ အထိကို မခံနိုင်တော့ဘူး…..ဒီမှာကြည့်ပါဦး….အညိုအမဲတောင် စွဲနေတယ်….” မမရီက ဘော်လီအကျ င်္ီအား ချွတ်၍ သူမ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးအား ဖွင့်ပြလိုက်ရာ တကယ်ပင် လက်ရာကြီးများထင်၍ ညိုမဲနေပြီး နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ ယောင်နေပါသည်။ နဂိုကမှ ကြီးလှသော နို့အုံကြီးများမှာ အခုလို ယောင်နေတော့ ပိုပြီးဖောင်း ကားနေသည်။ ကျွန်တော်က အသာအယာကိုင်ကြည့်ရာ….. ” အို….ကျွတ်….ကျွတ်….ကျွတ်…..မမရဲ့ နို့ကြီးတွေ ကျိန်းနေတယ် မောင်လေးရယ်…..မနေ့တုန်းကလို အရမ်းကြီး မချေလိုက်နဲ့နော်….တကယ်လို့ မောင်လေး ကိုင်ရင်တော့ အသာအယာကိုင်ပေါ့ကွယ်…..” ကျွန်တော်သည် မမ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးအား အသာအယာပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ရင်းကပင် စိတ်များမှာ ကြွသထက် ကြွလာ ရပြီး ကျွန်တော်၏ လီးကြီးမှာလည်း မာတောင်၍ လာသဖြင့် မနည်းပင် စိတ်ကို ထိန်းထားရလေသည်။
” မမရဲ့….ဟို….ဟို….စောက်ပတ်ကြီးကရော နာနေသလားဟင်….” ” အော်….အဲဒီကတော့ ဒါလောက် မနာပါဘူး….ဒီနို့ကြီးတွေသာ ကျိန်းနေတာပါ….ဘာလဲ မောင်လေးက လိုးချင်နေ ပြန်ပြီလား…..” ” ဒါပေါ့….မမရယ်….” ” ကဲဒါဖြင့် မင်းလိုးချင်ရင် လိုးပေါ့….ဒါပေမယ့် မနေ့ကလိုတော့ မကြမ်းနဲ့နော်….” ” ဟုတ်ကဲ့….မမ ကျွန်တော် အခု ကောင်းကောင်းလိုးတတ်နေပါပြီ….မမကြိုက်သလိုပဲ လိုးပါ့မယ်….” ” ကဲ….ဒါဖြင့်….လာ….” ဟု ပြောပြောဆိုဆို မမရီက ထဘီကို လှန်ပေးလိုက်ရာက ပေါင်ကြီးတွေကို ဒူးကွေးပြီး ထောင်ပေးကာ ကားပေး လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှပြောမနေတော့ပဲ တက်၍လိုးပါတော့သည်။ မမရီက ဖြေးဖြေးမှန်မှန် လိုးရန် ပြောထားသော်လည်း စလိုးကာစ ဆယ်ချက် ဆယ့်ငါးချက်လောက်သာ မှန်မှန်လိုးပြီး နောက်ပိုင်းကျတော့ စိတ်က ထိန်းမရ သိမ်းမနိုင်ဖြစ်လာရသည့်အတွက် မှန်မှန်မှ မြန်မြန်….အဲဒီကမှ မြန်မြန်က ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ရင်း ဒလကြမ်းလိုးလေတော့ သည်။ မမရီကလည်း စောစောကသာ ဖြေးဖြေးလိုးရန် ပြောသော်လည်း အခုတော့ သူကိုယ်တိုင်ကပင် ဖင်ကြီးတွေကို မြှောက်ကာ မြှောက်ကာဖြင့် ကော့ကော့ပေးနေပြီး အောက်ကနေ တအင်းအင်းညီးလျက် ကျွန်တော့်ခါးကို အတင်းဖက်ပြီး ကျွန်တော်က ဆောင့်၍ လိုးလိုက်တိုင်း သူ့ဖင်ကြီးကို တအားပင် ပင့်ပင့်ပြီးကြွကာ စောက်ပတ် ခုံးခုံးကြီးအား ကော့၍ ကော့၍ ပေးနေသောကြောင့် သူမ၏ စောက်ပတ်အုံနှင့် ကျွန်တော်၏ ဆီးခုံတို့ တဖြောင်းဖြောင်း မြည်အောင်ရိုက်ခတ်နေသည့်ပြင် လီးနှင့် စောက်ပတ် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် အသံတို့ကလည်း တဘွတ်ဘွတ်မြည်နေပါတော့သည်။
” ကောင်းလိုက်တာ….မောင်လေးရယ်….မမ တကိုယ်လုံး ကိုက်ခဲနေတာတွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး.. …အမလေး….နာနာဆောင့်စမ်းပါ….မောင်လေးရဲ့….ကောင်းလှချည်လားနော်….ဟင်း ဟင်း….ဆောင့် ဆောင့်….လိုး လိုး.. …အဲ ဟုတ်ပြီ….ဟုတ်ပြီ…..တအားဆောင့်ပါ…..မောင်လေးရဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး မဆောင့်နိုင်တော့ဘူးလားနော်…..အား….ဟုတ်. …ပြီ….အမလေး….ကျွတ်….ကျွတ်…ကောင်းလိုက်တာနော်…..” ” အား….ကျွတ်….ကောင်းလိုက်တာ မမရယ်….မမ စောက်ပတ်ကြီးက ကျွန်တော့်လီးကြီးကို ဆွဲညှစ်ထားသလိုပဲ…. ဟင်း….” ” ပြွတ်….ဘွတ်….ပြွတ်….ဘွပ်….” ” ကျွန်တော် ပြီးခါနီးပြီ မမ…..တအားဆောင့်တော့မယ်နော်….” ” ဆောင့် ဆောင့် မောင်လေး…..လိုးသာလိုး….မမလည်း ပြီးကာနီးပြီ….အဲ…ဟုတ်ပြီ….ဟုတ်ပြီ….ပြွတ်….ပြွတ်….. စွပ်…ဘွပ်….စွပ်…ပလွတ်….ဘွပ်…အင့်…အင့်….ကောင်း….ကောင်းလိုက်တာ…. ပြီး…ပြီးတော့မယ်….အင့်….အင့်….အား……” နှစ်ယောက်သားပြိုင်တူပြီးကြရာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မလွတ်တမ်းဖက်ထားလိုက်ကြတော့သည်။ ပြီးတော့ လီးနှင့် စောက်ပတ်ကို တပ်လျက်သား မချွတ်ဘဲ မှိန်းနေလိုက်ကြသည်မှာ မည်မျှကြာသွားသည် မသိပါ….အိမ်ရှေ့ဆီမှ….. ” ဟဲ့….သမီး….အရီ အိပ်ပြီလား….” ဟူသော မမရီ၏ အမေအသံကို ကြားလိုက်ရမှ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ထပ်လျက်သားရှိနေရာမှ ကဗျာ ကယာထပြီး အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်လိုက်ကြကာ မမရီက ဝမ်းလျားမှောက်လျက်….ကျွန်တော်က မမရီ၏ ပေါင်ပေါ်သို့ တက်၍ နင်းပေးသည်။ ” မအိပ်သေးပါဘူး အမေ….ကျမ အနင်းခံနေတုန်းပါ….အို….ကျွတ်….ကျွတ်…မောင်လေးကလည်း ဒကောက်ကွေး ကို တက်နင်းတော့ နာတာပေါ့ မောင်လေးရဲ့….ကဲ တော်ပါတော့ကွယ်….ငါ့မောင်လည်း ညောင်းလှရောပေါ့….” ထိုသို့ပြောမှပင် ကျွန်တော်လည်း မမရီအပေါ်မှ ဆင်းကာ နှစ်ယောက်စလုံး အိမ်ရှေ့သို့ ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ပြီးပါပြီ။